04 aprily 2017
TAPATAPAK'AHITRA FAMOAHAM-BOKY NIKS ALOKA FANAHY
I Niks Aloka Fanahy no miantrano eto amintsika. Ny tena anarany dia ARIVELO Fanilo Harimiadana, mbola tanora, 23 taona, ary mbola mianatra. Nanomboka nanoratra ny taona 2005 izy ary ny marsa 2017 no mamoaka ny boky ANTSAN'NY TIA.
Miarahaba anao Niks Aloka Fanahy. Ahoana no nahatonga an'izay anarana izay?
Ny tena marina dia anarana fiantsoan'ny namako ahy ny hoe Niks; Ny Aloka Fanahy indray dia ny vatako mazava ho azy. Ny vatana manko no tandindon'ny fanahy. Ny fanahiko no miainga mampanoratra ny vatako dia io tandindon'ny fanahiko io izany. Raha fintinina dia midika hoe endriky ny tontolo tsy alehan'ny vatako fa tongan'ny saiko no voarakitry ny hoe "Aloka Fanahy". Niks Aloka Fanahy mira vatana entin'ny fanahin'i Niks manoratra.
Efa manambady sa mitady sa efa misy fofony any?
Mbola tsy manambady fa vao mitady angamba. Hihi!
Araka ny hevitrao, mety hanelingelina ny fanambadiana ve ny fanoratana?
Tsia, nefa miankina amin'ilay hovadiana koa. Raha apetrany ho olana aminy io dia ho lasa olana foana. Fa raha arahiny amin'ny onjany dia inoako fa ho fahafinaretany aza.
Tokony ho poety ve ny vadina poety aminao?
Tsara kokoa angamba raha hoe ny iray ihany no Poety e! Hazavaiko kely.
Tsara kokoa raha olona tsy dia mitovy toetra no mpivady e! Natao hifameno manko ireo. Sady raha samy variana manakanto izy roa dia mihahaka ny tokantranony.
Ao anatin’ny tontolon’ny pôezia ny poety sy ny fanambadiana a. Fantatra fa ao anaty fikambanana ianao. Hazavao hoe ny safidianao?
Mpikambana ao amin'ny HAVÀTSA-UPEM aho. Ny antony nisafidianako ny fikambanana dia betsaka :
- ao no tiako hitrandrahana ny teny malagasy,
- mahaliana ahy ireo atrikasa fanaony isan-taona hampianarana manoratra,
- maro koa ny mpanoratra efa zokinjokiny ao mba azoko anontaniana izay tokony halehako.
Fa misy tanora maro ao?
Eny namana, ny ankamaroan'ireo mpikambana vao noraisina amin’izao dia tanora daholo.
Izay no ela, ahoana sy ahoana io bokinao vaovao io?
Io boky io dia milohateny hoe ANTSAN'NY TIA. Boky misy hatramin'ny 78 pejy. Mihira ny fitiavana moa mazava ho azy. A5 ny habeny. Ny fonony matevina sy miloko ary azo diovina amin’ny lamba mando raha misy loto ohatra.
Tononkalo daholo no hita ao.
Boky fahafiry tamin'ny navoakanao io? Nahoana no natao tononkalom-pitiavana avokoa?
Boky voalohany io. Natao tononkalom-pitiavana io mba hahitana taratra ny maha ANTSAN'NY TIA azy, izany hoe izay ao am-pon'ny tia.
Fitiavana amin'ny lafiny rehetra no resahina ao.
Aiza no ahitana ny boky?
Afaka mifandray amiko eto amin’ny “Facebook“ Niks Aloka Fanahy izay liana na miresaka amiko mivantana.
Mitondra fampandrosoana ve ny boky?
Amiko aloha dia mampandroso tokoa ny boky e! Io no ahafahana mampita amin'ny tanora ny tena fomba fanoratra, ny tanora manko no hoavin'ny firenena. Nefa dia ny tanora mihitsy ankehitriny no simbain'ny fanatontoloana. Noho izany, mety hitarika tsikelikely ny tanora hiala amin’ny fanafohezan-teny sy ny fampiasana "u" sy "w" anaty teny malagasy ny fitiavany mamaky boky.
Araka ny fahitanao azy, mbola mazoto mamaky boky ve ny tanora amin’izao fotoana izao?
Mbola maro ihany aloha ny tanora mandalo ao mamaky boky e!
Araka ny hevitrao, manimba sa manampy ny boky ny Facebook?
Manimba ny teny malagasy ny Facebook raha ny fahatsapako azy. Raha amin’ny resaka boky indray dia manampy izy satria azo atao sehatra hifampizarana sy hivarotana boky.
Eny e, ny zavatra rehetra tsy maintsy misy lafy tsarany sy lafy ratsiny fa ilaina ny fahaizana mandanjalanja azy, isika izao dia ny facebook no ifankahalalana toy izao.
Marina izany. Fa eto amin'ny Facebook aloha dia ny lafy ratsiny no tena misongadina
Inona no mampiavaka ny tononkalonao amin’ny mpanoratra hafa Niks Aloka Fanahy?
Misy fifampitohizan-kevitra ny tononkalo ao anatiny.
Hazavao kely hoe?
Hitanao? Ny tononkalo soratako raha antsaina dia mifampitohy tanteraka. Sarotsarotra avahana ny andininy satria mifampitohy ny heviny. Fa raha vakina kosa dia hita miavaka tsara ny andininy. Ny tena matetika lazain'ny olona indray dia hoe mitovy rafitra ny tononkalon'i Niks sy i Rado (Georges Andriamanantena).
Ohatra ity tononkaloko ity izay hita ao anatin’ny boky :
Ny nofoko ve...? hoy aho, nofo ihany
Ny fiainako koa, miserana izany
Ny vatan'ny foko hiverina ho tany
Fa ny soratro kosa, tsy ho resin'izany
Io ny sombiny ho hitantsika ao anaty boky fa manentana antsika mpankafy izany hoe pôezia izany aho mba hanjifa ny boky.
Amin'ny alalan'izay tononkalo tsara rindra izay no ifanaovantsika veloma amin'i Niks Aloka Fanahy. Mirary lalan-davitra ho an'i ANTSAN'NY TIA eo anivon'ny tantaran'ny literatiora malagasy. Veloma finaritra.
Misaotra ny namana Ikaloyna Vony sy ny Pôetawebs ary mametraka ny mandra-pihaona e !